NextMapping | Ku saabsan: Philanthropy
Marka La Gaarayo ™ waxaan fiirineynaa mustaqbalka - mustaqbalka ugu dambeeya wuxuu ku saabsan yahay carruurteenna. Waxaan si xamaasad leh u aaminsanahay in caruurta oo la siiyo xirfadaha 'hogaaminta' kaliya aysan ka caawin doonin kaliya inay maraan caqabadaha hada laakiin sidoo kale mustaqbalka goobta shaqada ka dhigo mid ka fiican halka ugu dambaynna adduunka.
Waxaan u abuurnay Caruurta Hogaaminta inay noqon karto mid ka mid ah qaababkeena aan dib ugu celin karno - waxaan u qabanaa barnaamijyo sanadle ah caruurta waxaanan ka shaqeyneynaa mashruuc xamaasad leh oo ah sameynta degel internet ah si loo caawiyo caruurta inay bartaan xirfadaha aasaasiga ah ee hogaaminta.
Himiladeenna: Abuur mustaqbal wanaagsan adiga oo u diyaar garoobaya hoggaamiyaasheena mustaqbalka… carruurta!
Farxadda ugu weyn ee noo jirta waa saameynta ay ku leedahay carruurta adduunka oo dhan waxaana si deeqsinimo leh u siin doonnaa tiro hay'ado samo fal ah oo diiradda saaraya carruurta. ”
Reg & Cheryl Cran, Aasaasayaasha
Sida ay ushaqeyso: 4 C's ee caruurta hogaamin karta
Waxaan abuurnaa Xariir Caruur Lead Hogaanka ah oo caruurta iyo waalidkood ama macalimiinta ay ku heli karaan xirfadaha hogaaminta caruurta. Waxaan iskaashi la sameyneynaa kooxo isku fikir ah oo carruurta ah si aan uga caawino carruurta inay noqdaan hoggaamiyeyaasha mustaqbalkeenna diyaar u ah.
Is-aaminiddu waxay ku dhisan tahay is-aaminaad caafimaad leh, waxaan carruurta ka caawinnaa inay dhisaan kalsoonidooda naftooda taasoo ka caawisa iyaga inay go'aanno wanaagsan gaaraan oo ay hal-abuurka dhibaatada xalliyaan.
Waxaan barnaa in lahaanshuhu inuu la mid yahay 'awood sare' awood u yeesho inuu naftiisa wax u hadlo, inuu naftiisa run u ahaado iyo sida loogu istaago waxa saxda ah.
Waxaan ka caawinnaa carruurta inay bartaan muhimadda luqadda jirka, ujeedka iyo ereyada iyo sida ay u saameeyaan dareenka ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale ereyada ay doortaan inay saamaynayaan kuwa kale.
Waxaan ka caawinnaa carruurta inay arkaan in dabeecadda dhismuhu ay tahay cunsur muhiim u ah hoggaamiye. Dabeecad dhisida waxaa ka mid ah sameynta waxa saxda ah marka qofna uusan daawaneynin oo dooranayo inuu ka fikiro 'we to we to' mindset.
Ma ku dhiirigelisay inaad ka mid noqoto mashruucan cajiibka ah?
Nala soo xiriir si aad u ogaato sida!